Mpanamboatra mpamono otrikaretina endoskopy malefaka malefaka any China Shinva
Famonoana otrikaretina endoscope otrikaina malefaka
Auto Flexible Endoscope Washer-disinfector dia noforonina mifototra amin'ny fenitra ISO15883-4 izay ampiasaina manokana amin'ny fanasana sy famonoana otrikaretina ho an'ny Endoscope malefaka.
Fanasana avo lenta
Rider series automatique endoscope washer dia afaka mamita ny dingan'ny fanasana sy famonoana otrikaina amin'ny endoscope malefaka iray ao anatin'ny 15 minitra, manatsara be ny fahombiazan'ny fihodinan'ny endoscope.
Volavola fiarovana endoscope
■ Fiasa fitsapana leakage
Ny fitsapana ny famoahana endoscope dia ho vita alohan'ny hifandraisany amin'ny ranoka ao amin'ny efitrano, ary afaka manao fitiliana mitohy mandritra ny tsingerina. Rehefa mihoatra ny isa azo ekena ny sandan'ny famoahana voamarika dia hamoaka fambara fanairana an-tsary sy hainoho ny rafitra ary hamarana ny tsingerina mandeha ho azy
Rafitra fanaraha-maso ny fizotrany
■ Manamboatra fanontana data
Ny mpanonta dia afaka manonta ny angon-drakitry ny fanasana sy ny famonoana otrikaretina isaky ny endoscope, mba ho mora ho an'ny mpampiasa ny manangona firaketana.
■ Fomba fitantanana data.
Ny rafitra dia afaka manangona ny mombamomba ireo mpandraharaha endoscope ary ny angona momba ny fanasan-damba sy ny famonoana otrikaretina dia afaka mampifandray ny rafitry ny solosaina fitantanana ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny tamba-jotra, izay fidirana mora amin'ny fitantanana fampifangaroana ho an'ny mombamomba ny marary sy ny fampahalalana momba ny fanasana endoskopitra sy ny famonoana otrikaretina.
■ Rehefa vita ny fikojakojana, fanamboarana na fanelingelenana ny masinina, dia tokony hanao programa famonoan-tena.
■ Ny fiasan'ny otrikaretina amin'ny tena dia mety mamono tanteraka ny efitry ny masinina sy ny fantsona, ao anatin'izany ny sivana 0.1um, hisorohana ny famonoana otrikaretina avy amin'ny fanasan-damba.
Manasa sy mamono otrikaretina 100%
■ Manasa sy mamono otrikaina amin'ny fantsom-pifandraisana
Ny efitrano fanasana misy fantsom-panafody sy sandry ahodina izay afaka manasa sy mamono otrikaretina ho an'ny faritra ivelany amin'ny endoscope, raha ny rano mivezivezy kosa dia afaka manasa sy mamono otrikaretina ho an'ny lavaka anatiny manontolo ao amin'ny endoscope.
■ Paompom-booster pression lumenan'ny endoscope
Amin'ny paompy booster lumen endoscope tsy miankina, dia afaka manasa sy mamono otrikaretina tsy tapaka, tsindrona entona na rano ary manao biopsy na lumen suction, hisorohana ny famoronana biofilm bakteria.
■ Miakatra ny rano voasivana
Aorian'ny famonoana otrikaina dia hosasana amin'ny rano ilay endoscope izay voasivan'ny sivana 0.1um mba hisorohana ny fandotoana faharoa amin'ny rano miakatra tsy madio.
■ Asa fanamainana
Ny asa fanamainana dia afaka mahatsapa fa maina ho an'ny lumen anatiny amin'ny endoscope miaraka amina fomba roa, fanamainana rivotra ary fanamainana alikaola.
Fiarovana tonga lafatra ho an'ny mpandraharaha
■ Varavarana mandeha ho azy, fanoloana pedal tongotra
Alao sary an-tsaina ny varavarana fitaratra mandeha ho azy, mora jerena ny toetoetran'ny fanasana sy ny famonoana otrikaretina; kapila fanodin-tongotra, azo sokafana ny varavarana amin'ny alàlan'ny fandakana moramora ny famindrana tongotra.
■ Voahidy tanteraka
Rider series endoscope washer-disinfector dia noforonina tamin'ny rafitra mihidy tanteraka. ny varavarana fitaratra mandeha ho azy dia hanindry mafy ny vavahady famehezana varavarana mba hisorohana ny fofon'ny famonoana otrikaretina sy fiarovana ny fahasalamana faratampon'ny mpiasan'ny fahasalamana.
■ Nampiana otrikaina simika
Amin'ny dingan'ny fanasana sy famonoana otrikaretina, ny additives simika, toy ny anzima, alikaola ary otrika otrikaretina dia azo refesina ary ampiana ho azy.
■ Fampiasana santionany mandeha ho azy ny otrikaretina
Andian-tsarimihetsika Rider B misy fitaovana fampidinana otrikaretina mandeha ho azy izay mety ho an'ny mpampiasa ny manara-maso ny fatran'ny famonoana otrikaretina sy miaro ny fiarovana ny fiarovana ny mpandraharaha.
■ Fampidirana otrikaina mandeha ho azy sy famonoana otrikaretina
Ny andiany Rider B dia manampy amin'ny fampidirana otrikaretina otrikaina sy famoahana azy. Rehefa ampidirina ilay famonoana otrikaretina, arotsaho ao anaty efitrano fanasana fotsiny ilay otrikaretina ary atombohy ny programa fanampiana famonoana otrikaretina. Rehefa mivoaka dia atombohy fotsiny ny programa famoahana otrikaretina.
Manaraka: Fanasan-damba fitifirana varavarana mandeha ho azy